ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ ပြည်တွင်းက | ဧရာဝတီ
ရဲနည်| May 28, 2012 | Hits:1
| | လာမယ့် ဇွန်လ ၂၀-၂၁ ရက် ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပမယ့် “မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသစ် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၁၂ (New Myanmar Investment Summit 2012)” မတိုင်မီ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေ လာရောက်စုံစမ်းမှုများ ရှိပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ထင်သလောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ မလုပ်ကြဘူး၊ “ကျနော်တို့ လွဲနေတာတွေ တော့ရှိနေပြီ။ ဟန်ရေးပြနေလို့ မရတော့ဘူး၊ အနှစ်သာရရှိရှိလုပ်မှ ရမယ်” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ လမ်း၊ တံတား၊ ရထား၊ ရေ၊ မီး နဲ့ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး အစရှိတဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ အရေးပေါ်တည်ဆောက်ရန် လိုနေပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
ဒါဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ နေပြည်တော်အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေ မလုံလောက်သေးကြောင်း နှိုးဆော်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာကျပ် ငွေလဲနှုန်းစနစ် ပြုပြင်တာ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ၊ အလုပ်သမားဥပဒေ ရေးဆွဲပြဌာန်းတာဟာ ဩဘာပေးစရာတွေပါ။ ဒါတွေလောက်နဲ့ နိုင်ငံတကာက ငွေအလုံးအရင်းနဲ့ ထုတ်ချေးမယ့် သူတွေဆီက ယုံကြည်မှု ချက်ချင်းကြီးရဖို့ မလုံလောက်ဘူးလို့ လတ်တလောရလဒ်တွေက သက်သေပြနေပါပြီ။
သမ္မတရဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေးရုံးနဲ့ နီးစပ်သူတွေအဆိုအရ နိုင်ငံခြားအရန်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံ လက်မှာကိုင်ထားတဲ့ (တနည်း နိုင်ငံသားတဦး ဒေါ်လာ ၁၃၀ စီ ပိုင်တဲ့) မြန်မာအစိုးရဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရံပုံငွေ အဖွဲ့ (IMF) နဲ့ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) တို့လို ငွေချေးမယ့်သူတွေရယ်၊ တခြားနိုင်ငံခြား အစိုးရတွေဆီက အကူအညီတွေရယ်နဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေ၊ မီး၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး အစရှိတဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဦးစားပေး လျာထားကြောင်း သိရပါတယ်။
မြင်သာတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများစုကို လွှတ်ပေးတာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အမတ်တွေကို လွှတ်တော်ထဲ ဝင်ခွင့်ပြုတာ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ အပစ်ရပ်ရေး စကားပြောတာတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ် ဩဇာရှိတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂတို့က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးတွေကို (အကန့်အသတ်နဲ့) ပြန်ရုပ်သိမ်းသွားပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ငွေချေးဖို့ဆုံးဖြတ်ရေးဟာ တခြားအချက်တွေပေါ်လည်း မူတည်ပါသေးတယ်။ ADB ကတော့ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ မြင့်တက်လာပြီး ဈေးကွက်ထဲမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတိုးလာဖို့၊ ငွေဖောင်းပွမှုကို ကာကွယ်ဖို့၊ အစိုးရအသုံးစရိတ် လျော်ကန်သင့်မြတ်စွာ သုံးစွဲဖို့၊ မလိုအပ်ဘဲ အကြွေးထပ်မတင်ဖို့ကို အာရုံစိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေး၊ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ထုတ်လုပ်ရေးတို့မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြီးအကျယ်လိုနေပေမယ့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများစုဟာ စွမ်းအင်၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေး၊ သယံဇာတ တူးဖော်ရေးတွေမှာသာများပြီး အစိုးရဘဏ်တွေက ထုတ်ချေးတာတွေကလည်း အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ အကြီးစားစီမံကိန်းတွေ၊ ပြည်တွင်း အလတ်စားနဲ့ အသေးစား လုပ်ငန်းရှင်တွေ မဟုတ်ဘဲ စွမ်းအင်နဲ့ သယံဇာတ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ကန်ထရိုက်လုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကတွေကိုသာ ငွေအများစု ထုတ်ချေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြောရရင် တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ ဦးစီးတဲ့စီမံကိန်းတွေဟာ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ နည်းပညာ လွှဲပြောင်းမှု မရှိသလောက်ဖြစ်ပေမယ့် လမ်းဖောက်လုပ်ရေး၊ တရုတ်အလုပ်သမားများအတွက် ဖျော်ဖြေရေးလို ကိစ္စရပ်များကိုတော့ မြန်မာ စစ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ခရိုနီတွေကို ကန်ထရိုက်ပြန်ပေးပါတယ်။ ဒီကန်ထရိုက် လုပ်ငန်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ကို နိုင်ငံတော်က ကျခံရပါတယ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆို စီမံကိန်းကို စစ်တပ်က လုံခြုံရေးပါ ပေးရပါတယ်။
မြန်မာပြည် စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပါရဂူဘွဲ့ယူ ကျမ်း မကြာသေးခင်ကတင် ရေးပြီးသွားသူ ဂျဲရတ်ဘတ်ဆင်ဂျာက နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိလုပ်ရမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရဲ့ တစိတ်တပိုင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက ပြဿနာလည်း မဟုတ်၊ အဖြေလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“အရေးအကြီးဆုံး ပြဿနာတခုက (ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု) ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုထည့်ဝင်မယ့် အရင်းအနှီးနဲ့ စုဆောင်းငွေတွေကို လမ်းညွန်ရာမှာ မြန်မာ့စီးပွားရေးစနစ်ဟာ အရမ်းကို ဆိုးရွားလွန်းနေတာပါ။ နည်းပညာနဲ့ ဥပဒေပိုင်းမှာ အတားအဆီးတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ဓနကို ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ထည့်ဝင်ရင်းနှီးဖို့၊ အဲဒီကတဆင့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးထဲ စီးဝင်သွားစေဖို့ အဟန့်အတားတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်” လို့ အခု ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်နေပြီး Vriens and Partners အတွက် အကြံပေးလုပ်နေတဲ့ ဂျဲရတ်ဘတ်ဆင်ဂျာက ပြောတာကို အေးရှားတိုင်းမ် အွန်လိုင်း သတင်းက ရေးသားပါတယ်။
အမှန်တကယ်လည်း ငွေတွေဟာ သူ့နေရာနဲ့သူ စနစ်တကျ ခွဲဝေအသုံးပြုနေတာထက် ဦးတည်ရာမဲ့ ဝရုန်းသုန်းကား ရွေ့နေကြတာပါ။ ကားဆိုလည်းကားမို့လို့၊ အိမ်ခြံမြေဆိုလည်း အိမ်ခြံမြေမို့လို့ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချနေကြတာဟာ မြန်မာ့ဈေးကွက်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလို ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာလည်း ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ့ရောင်းရတာတွေ၊ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတွေကရတဲ့ ဝင်ငွေတွေဟာ အထိန်းအသိမ်းညံ့ဖျင်းတာ၊ အပျောက်ရိုက်တာနဲ့ စစ်အသုံးစရိတ် အဆမတန်သုံးတာကြောင့် သဲထဲရေသွန်သလို အရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဂျဲရတ်ဘတ်ဆင်ဂျာက “ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု”က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒနဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ အစိုးရအသုံးစရိတ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် သုံးစွဲတာအပြင် ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ (အထူးသဖြင့် အသေးစားနဲ့ အလတ်စား လုပ်ငန်းတွေ) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ ဥပဒေတွေ ပြင်တန်ပြင်၊ ဖျက်တန်ဖျက်ပြီး အရင်းအနှီးတွေ လွယ်ကူစွာ ရနိုင်ရေး၊ လုပ်ငန်းတွေ ချောချောမောမော လည်ပတ်နိုင်ရေး အကူအညီတွေ ပေးသင့်ပါတယ်။ သူက “ဂျီဒီပီတက်သွားဖို့ မဟုတ်တာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အားပေးပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ ဝင်လာတာထက်ကို ရေရှည်မှာ ပိုအရေးပါပါတယ်” တဲ့။
ဒီလို ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ ဈေးကွက်ကို ပြင်ဆင်နေရာချဖို့၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဝင်ရောက်လာနိုင်ဖို့ မူဝါဒနဲ့ ဥပဒေ ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်ဆောင်ရမယ့် တချိန်တည်းမှာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဖြစ်ထွန်းလာမှာတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ထက်ထက်မြက်မြက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့်သူတွေ မွေးထုတ်ရေး၊ တနည်း လူ့အရင်းအနှီးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိန်ခေါ်မှုကလည်း လတ်တလောကို ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ မလွှဲသာတာကတော့ ဒီကိစ္စဖြေရှင်းဖို့ နိုင်ငံခြား အကြံပေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက် ဒေါ်လာ မီလီယံပေါင်းများစွာ ကုန်ကြရဦးမယ်ဆိုတာပါပဲ။
ကိုးကား။ ။ Kim Jolliffe ၏ Myanmar’s precarious opening
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> lv May 28, 2012 - 12:57 pm	think again
Reply	libra May 28, 2012 - 1:01 pm	Let me pls give my president for some advice as I’m the post graduate from uk. 1. We ultterly need to keep the money & belongings from tycoons & corrupted governors (both previous retired men & present people at government). 2. Price Control, it is very essential at the market by the government to check & practice all times. Price Control from top up to the food (both groceries & ready made junk food). 3. We needareal well educated person from developed country having ethics ->
Reply	graysky May 28, 2012 - 10:46 pm	Price control by Myanmar Government will not work because the government wouldn’t take any responsibilities if there are surplus or shortage of goods and services asaresult of price control. If this occurs, both consumer and producer will get hurt. What the government should do is to take control on some goods and services market which cannot leave alone in the market such as real estate and provide real agricultural funds or assistance to farmer and gardener.
Reply	libra May 28, 2012 - 1:10 pm	-> at the leader role of Ministry of Commerce (Minister), Chairman of UMFCCI (U Win Aung is wrong person), Ministry of Industry (Minister), Vice Presidents of country. Even we need Prime Ministers of different Cities should be educated persons from abroad. Our contry needsanew generation indeed, especially country has to be rebuilt with educated people from abroad real unis. Here abroad educated persons mean not the persons with invaluable fake masters or doctors from low class universities.
Reply	kommyo May 28, 2012 - 1:35 pm	Please used all money that you sold natural gas and crude oil also from money that sold electric to neighbor countries….where is all the money gone ?
Reply	May Thu May 28, 2012 - 3:50 pm	All of the money were used for Than shwe’s family, maung Aye, Aung Thaung and all of thir partners.
Reply	မောင်သိ May 28, 2012 - 3:55 pm	သယံဇာတတွေရောင်း လို့ရတဲ့ငွေတွေက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့အပေါင်းပါတွေ ၀ိုင်းတွယ်တာ တောင်မလောက်ဘူးဗျို့။ ဒါ့ကြောင့် ဆင်းရဲသား လယ်ယာမြေတွေကို အနိုင်ကျင့်ပြီး လိုက်သိမ်းနေတဲ့ အာဏာပိုင်အလိုတော်ရိ တွေကိုမျက်လုံးဇုံမှိတ်၊နားဇုံပိတ်ပြီး သမ္မတ လုပ်သူကအစ မသိကျိုးကျွန် ပြုထားတာပါ့။
Reply	Yu May 28, 2012 - 6:08 pm	We need to get the money back from juntas and tycoons really to be fair for the public! We have shortage of budget in the country! Because you all sold our country by using paper work, procurements and MOUs with China, Thai etc, but the income & benefits which is “should be amount” not coming to piblic, just too little for us. We need your money back for our country’s development and cannot borrow from others “anymore”!!! Too much credits with us already!! President, don’t be dull! Study..
Reply	Yu May 28, 2012 - 6:12 pm	..other democratic countries!!! How they retake and do act on them by judgments! How they manage for the public for the welfares! How did they judge them! How did people did them!
Reply	Aung Myint May 28, 2012 - 6:57 pm	Keeping the money back from them, they do not think about that, all the times they think about borrowing.. Stupid Government if you do not do keeping the cash and belongings back from them!!! I am very sure they won’t understand Price Control by tactical knowledge! They will not know how to exploit the tools for price control indeed. This is suchapain for the public, hell governors!!!
Reply	ပါကြီးဖိုး May 28, 2012 - 11:09 pm	အူမ မတောင့်လို့ သီလမစောင့်နိုင်တာကို နားလည်နိုင်ပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ အူမကွဲမတက် စားနေကြတယ် ရာထူးမြဲတုန်း စားထားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ပဲ သူတို့မှာ ရှိကြပုံရတယ် နဝတ နအဖခေတ် တလျောက်လုံး ရာထူးအပြောင်းအလဲတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အလှည့်ကျ စားခွင့်ပေးတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေသာ ဖြစ်ခဲ့တယ် ယခု ဦးသိန်းစ်ိန်ရဲ့ လက်ထက်မှာလည်း အရည်အချင်းမရှိ ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးကိုသာ ကြည့်တတ်တဲ့ လူတွေပဲ ရာထူးယူထားကြတုန်းပါ သမ္မတက ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချဖို့ ပြောနေပေမယ့် ဆင်းရဲသားလယ်သမားတွေရဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ဆက်ပြီး မတရားအသိမ်းခံနေရတာက ထူးဆန်းတယ်
Reply	zaw May 29, 2012 - 5:11 pm	Im strongly agree with Libra is comment but those people they might not think or review of our advise .But don’t publish ur post graduate fr UK….Some people will laugh !!!!!! Pls think about urself be4 writting comment..
Reply	ကိုပြည်သူ June 13, 2012 - 10:14 pm	ခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာနည်းပညာနဲ့ရင်နီးငွေရဘို့ FDIတကယ်လည်ပတ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာလိုနေပါတယ်။ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာမှာလည်းမြန်မာစစ်အစိုးရကလုံးဝလာဒ်မစားခဲ့ပါဘူး ။ကော်မရှင်မျာများပေးသူကိုသာ ခွင့်ပြုရောင်းချခဲ့တာပါ။ရင်းနှီမြုပ်နှံမှုတွေဝင်လာရင်လျှပ်စစ်မီးမရှိဘဲစက်ရုံတွေနေရာပေးဘို့လယ်တွေသ်ိမ်း ရတာပါ။ စပါးစိုက်တဲ့လယ်ကို အရင်လိုသိမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူး ဝယ်တာပါ။အကွက်ဖော်ပြီးမှ ပြန်ရောင်းမှာပါ။ဒါကနိုင်ငံလူများစုရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်တဲ့လယ်ယာကဏ္ဍတိုးတက်အောင် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးက အမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ဝယ်ပြိး အဆင့်မြှင့်တာပါ။လျော်ကြေးရတဲ့ငွေနဲ့